Chitsidzo chacho chinoitwa sei? Kune dzimwe nyika vamwe vanoita chitsidzo chekusaita zvepabonde kusvikira varoora kana kuroorwa. Vanoita izvi nekupa mhiko yakaita zvekunyorwa kana kuti vachiita zvengokutaura. Tsika iyi yakanyanya kukurumbira mumakore ekuma1990 chechi inonzi Southern Baptist Convention yekuUnited States payakatanga chirongwa chainzi “True Love Waits.” Chirongwa ichi chaishandisa zvimwe zviri muBhaibheri kukurudzira vechiduku kuti vasamhanyira kuita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa uye kuita kuti vakurudzirane ivo pachavo.
Bhaibheri rinokurudzira kuti munhu azvisarudzire zvichibva pasi pemwoyo kwete kuita chitsidzo chakaita zvekunyorwa kana kuti chokuudza vamwe. Rinoita izvi nokubatsira munhu kuti ‘aite kuti simba rake rokunzwisisa rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’ (VaHebheru 5:14) Chikonzero chikuru chokuti munhu arege kuita zvepabonde asati aroora kana kuroorwa ndechokuti anenge achida kuremekedza Mwari uyo akatanga nyaya dzewanano, kwete kutyira kuti angazobatwa nezvirwere kana kuti angazobata pamuviri.—Mateu 5:19; 19:4-6.
Mibvunzo Inobvunza Vechiduku, Bhuku 2